Dhoollacaddayn ku bixi: hanaan aad wax ku iibsanayso kaash la'aan - BBC News Somali
Dhoollacaddayn ku bixi: hanaan aad wax ku iibsanayso kaash la'aan
25 Nofembar 2017
Image caption Waxaa soo yaraanaya lacagtii kaashka ahayd ee la qaadan jiray
Kharash garaynta iyo kaydsiga lacagta ayaa u dhacaya si aan hore loo arag. Qaybo dunida ka mid ah, waxaad wax ku gadan kartaa adigoo u dhoolla caddeeya mishiin oo kaliya.
Sidaasoo ay tahay, sare u kaca tiknoloojiyada ayaa khatar ku haya inuu meesha ka saaro laba tiir oo dhaqaaluhu ku taagan yahay: hanaanka bankiyada iyo lacagta caddaanka ah qudheeda.
Laakin dadka wax iibsada ma noqon doonaan kuwa ugu dambayn ay dhibaatadu ku dhacayso?
Image caption Gabar kaamero eegeysa si ay lacag u bixiso
Waxaad gashaa makhaayadda KFC KPro ee ku taalla magaalada bariga shiinaha ee Hangzhou, waxaadna arkaysaa dadka makhaayadda ku jira oo dhoolla caddaynaya si ay u casheeyaan.
Hanaanka 'dhoollacaddayn ku bixi' wuxuu micnihiisu yahay in kaamero ku taalla halka lacagta lagu bixiyo ay eegeyso wajiga qofka, ka dibna ay ka xaqiijinayso haybta qofka barnaamijka Alipay app, sidaasna ay lacagta ku goosanayso.
Telefoonnada casriga ah waxay oggol yihiin in faraha, isha bu'deeda iyo codka qofka ay aqoonsadaan - ama adigoo dukaan tago ayaa kaaga filan in aad wax iibsato. In farriin-qoraaleed la diro si bas loo raaco ama lacag loo xawilo ayaa aad looga isticmaalaa Afrika.
'Waxaa mahadaas leh lacagaha lagu bixiyo telefoonnada gacanta, waana mid macquul ah in aan aragno dal weyn oo sida Shiinaha oo kale ah in muddo shan sano gudaheed ah ay dadku noqdaan kuwo aan lacag caddaan ah sidan, haddii aysanba ka sii dhoweyn' Sidaa waxaa yiri Bryan Zangh oo wax ka aasaasay xarunta Cambridge Centre for alternative finance in UK.
Image caption Kaamerada waxay xaqiijinaysaa in qofka xogtiisa la hayo oo uu xisaab ku leeyahay barnaamijka Alipay app
'Xawaaraha uu isbeddelka tiknolojiyada ku socdo ayaa ka dhigaysa mid aan mirodhal noqon in si sax ah loo odoroso waxa dhici doona tobanka ama labaatanka sano ee soo socda' ayuu ku daray hadalkiisa Mr Zangh.
Mid baase hubaal ah; Malaayiin qof ayaa u jeestay inay isticmaalaan telefoonadooda casriga ah. Kaliya ma aha inay lacag ku bixiyaan, balse inay ku maareeyaan lacagtooda sida ayagoo deyn dalbada, raadsada caymiska ugu fiican, ama sadaqo ku bixiya.
Lacagaha aan kaashka lagu bixin ee Shiinaha ayaa sare u kacay 63% 2014 - 15. UK, kharashaadka aan loo isticmaalin lacagta noodka iyo qadaadiicda ah waxaa ka badan tan kaash la'aanta ah. Sidaa darteed, waxaa jira caqabado dunida oo dhan ka jira oo soo wajahay kaashka.
Image caption Dad badan waxay door bidayaan inaysan kaash qaadan
Dhanka kale, tiknolojiyada ayaa dib-u-ikhtiraacid ku samaynaysa hanaanka uu u dhisan yahay dhaqaalaheenna.
Tan iyo qarnigii 16aad, badeecadaha waxaa lagu beddelan jiray aleelo u taagnaa inay lacag yihiin.
Qarnigii 7aad, waxaa laga soo saaray lacagta sunuudda ah Lydia, oo hadda loo yaqaanno Turkiga.
Wakhti dheer ka dibna, lacagta xaashida ah ayaa laga soo saaray Shiinaha.
Image caption Qarniyaal ka hor aleesha ayaa lacag ahaan loo isticmaali jjiray
Iminka waxaa la abuuri karaa oo si elektronik ah loo xafidi karaa nooca lacagta ee loo yaqaanno Cryptocurrency. In ka badan 1000 noocaas ah ayaa dunida ka jira, waxaana loo yaqaannaa Bitcoin.
Dhamaan arrimahaas waxay dhalinayaan su'aalo la xiriira gacan ku haynta iyo saamaynta. Yaa gacanta ku haya lacagaha, ma xukuumad mise shabakado kombiyuutarro? Yaa xukuma mushaarkeenna, ma shirkadaha tiknolojiyada, kaararka lacagaha, mise baanan?
Tan ugu weyn ee lagu doodi karo waxay tahay yaa gacanta ku haya xogta lacagaha aan bixinno iyo kuwa na soo gala - ma annaga mise ayaga?